Virtual Reality Porn လာသည် - သတင်း Rule
Virtual Reality Porn လာသည်
ထိုသို့ VHS အသက်အရွယ်၌ရှိ၏အဖြစ်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာ VR စစ်ပွဲများ၌ရှိသကဲ့သို့ဆာပဖြစ်နိုင်ပါတယ် - သို့မဟုတ်က weirdos များအတွက်ဇာတ်ကွက်ဖြစ်နိုင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “virtual reality porn ကြွလာပေမယ့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအောင်မြင်မှုအတိုင်းလိုက်နာလိမ့်မည်?” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 24 မတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 13.46 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
နည်းပညာ၏အသက်အကြီးဆုံးအလေးချိန်တစ်ခုမှာဘယ်မှာ porn တတ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, အောင်မြင်မှုအောက်ပါအတိုင်း. ဒါဟာကို VHS Betamax ထွက်ရိုက်နှက်ကူညီပေးခဲ့ရဲ့; က Blu-ray HDDVD ကျော်နောက်ဆုံးအောင်ပွဲပေး၏ (ပေမဲ့ Sony ကပြီးတော့ချကျောထောက်နောက်ခံပြု HD ကိုအွန်လိုင်း streaming များနှစ်ခုလုံးကို formats မှခေါင်းတလားထဲမှာလက်သည်းထောက်ပံ့ပေးမီက); ထိုသို့ပိုမြန်တဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများကိုဖြန့်ဝေကူညီပေးခဲ့, ပထမဆုံးဘရော့ဘန်းဖို့ပြီးတော့နှင့်-up က dial မှအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကြောင်းပြချက်ပေး.
ဒါကြောင့် virtual reality စစ်ပွဲများအတွက်တူညီတဲ့သတ်ဖြတ်မှုထိုးနှက်ပေးအကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်, သူတို့ပင်စတင်ခဲ့ပါတယ်မပြုမီ?
Related: ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်. ဘယ်လို virtual reality porn ကိုရောက်စေနိုင်
အမေရိကန် porn site ကို Pornhub ရှိပါတယ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် VR porn ရုပ်သံလိုင်းစတင်. အထူးကုပံ့ပိုးပေးနှင့်တွဲဖက်လုပ်ငန်းဆောင် BaDoinkVR, ကုမ္ပဏီအခမဲ့သူ့ရဲ့ site ပေါ်တွင်180˚နှင့်360˚ကို virtual ဗီဒီယိုမြင်ကွင်းများပေးစတင်မည်. အ porn ကို desktop ပေါ်မှာတစ်ကလစ်-and ဆွဲထုံးစံ၌ကြည့်ရှုဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်-built ကြည့်ရှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ထိုကဲ့သို့သော Google Cardboard သို့မဟုတ် Samsung ရဲ့ဂီယာ VR သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Oculus Rift အဖြစ်ဆက်ကပ်အပ်နှံနားကြပ်အဖြစ်လည်းကောင်းစျေးပေါမိုဘိုင်းဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း.
Pornhub ရဲ့ bluster နေသော်လည်း, ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်မှန်တဲ့ VR အကြောင်းအရာဖြန့်ချိသည်မဟုတ်. ဒါကလုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲ, ဒါကြောင့်တကယ်သရုပ်ဆောင်တွေသရုပ်ဆောင်မယ့်အထူးသဖြင့်လျှင်, အဲဒါကိုလုပ်နိုင်စွမ်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်သောကြောင့်,, နိမ့်ဆုံးမှာ, လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဦးခေါင်းကိုရာထူးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လည်ပတ်, နှင့် stereoscopic 3D ကမ်းလှမ်းရန်. ကွန်ပျူတာ-generated ပုံရိပ်နှင့်အတူသူတို့အကျင့်တို့ကိုကျင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်, ဒါပေမယ့်စံဖို့သရုပ်ဆောင်တွေ "ရိုက်ကူး" အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှအသေးစိတ် 3D မော်ဒယ်များ generate နိုငျသောစျေးကြီးဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ပါတယ်.
သော်ငြားလည်း, 360˚ဗီဒီယိုရှိနိုင်ပါ VR နားကြပ်များအတွက်အကြောင်းအရာ၏အကြီးမားဆုံးရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, YouTube နဲ့ Facebook မှာနှစ်ဦးစလုံးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် format ကိုထောက်ပံ့နှင့်အတူ. ဒီတော့စွမ်းရည်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ, Pornhub ရဲ့ porn ဝင်ရောက်ဖို့ VR ၏မွေးစားအဘို့အကားမောင်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. လေ့လာသူသောမတ်စ် Husson အဖြစ်, Forrester ကသုတေသန, သတိပြု, "တချို့အချိန်များအတွက်ကြက်သား-and ကြက်ဥပြဿနာရှိလိမ့်မည်: ကြေညာသူနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် VR အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်ရှိလိုအပ်ပါတယ်နှင့်စားသုံးသူအကြောင်းအရာအဆင်သင့်ဖြစ်ချင် (သူတို့သွားကြသည်လျှင်) အဆိုပါ VR နားကြပ်အပေါ်တစ်ဦးပရီမီယံသုံးစွဲဖို့။ "
အညစ်ညမ်း desktop ပေါ်မှာတစ်ကလစ်-and ဆွဲထုံးစံ၌ကြည့်ရှုဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်-built ကြည့်ရှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
အွန်လိုင်း360˚video၏ရရှိမှုရှိပါက, အထူးသဖြင့် porn, ကြောင်းအပေါက်ဖြည့်ပါမှကြွလာ, ဒါကြောင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်စံသတ်မှတ်သုံးယောက်ယှဉ်ပြိုင် VR ပလက်ဖောင်း၏ရာအပေါ်တစ်ဦးပစ္စည်းကိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့.
Sony ရဲ့က Playstation VR, အောက်တိုဘာလအတွက်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်, အောင်မြင်မှု၏အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိခြင်းအဖြစ်အများကမြင်ကြသည်. ဒါဟာတစ်ဦးတည်းနားကြပ်များအတွက်£ 300 အားဖြင့်ပြိုင်ဘက် Oculus နှင့် HTC undercutting ကြောင့်, က run ဖို့လိုအပ်သောစက်အဘို့နှင့်အခြား£ 300. သို့သော်ထိုက Playstation VR Sony ရဲ့ PlayStation4console ကတဆင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်, ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အပေါ်အားကိုးသောကွန်ပျူတာများမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်သော့ခတ်-Down ပလက်ဖောင်း. Sony ရဲ့ express ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ, က PS4 မှာ software ကို run ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြောင့်ကုမ္ပဏီ Pornhub အသုံးပြုသူများက '' homescreen မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသနားတော်မူမယ်လို့မဖြစ်နိုင်ပုံရတယ် (က PS4 ဝဘ်ဘရောက်ဇာရှိတတ်ပေမယ့်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းင်).
ဒါပေါ့, ဒီအားလုံး VR porn သင်တွေ့ကြုံခံစားချင်မယ်လို့တစ်ခုခုကြောင်းယူဆ. တကယ်တော့, စတူးဝပ်အမွေအနှစ်ထုတ်တွေ့ရှိရအဖြစ်, ဒါကြောင့် "အာရုံငါးပါးနှင့် arousal" ထက် "နက်ရှိုင်းစွာမနှစ်မြို့ဖွယ်" ရန်နီးကပ်လာင်. အမွေအနှစ်ကအားလုံးကိုနည်းနည်းနယ်ပယ်ပုံရသည် "ဟုကောက်ချက်ချ, "ဒါကြောင့် peccadilloes ၏တစ်ဦးအလွန်တိကျတဲ့ပြီးဝိုးတဝါးမနှစ်မြို့ဖွယ်အစုံနှင့်အတူတဦးတည်းအထီးကျန်လူကိုကဒီဇိုင်းဖြစ်ရဲ့နဲ့တူ.
37218	5 3: D, အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, ယဉ်ကျေးမှုကို, သတင်း, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, နည်းပညာ, ဗြိတိန်သတင်း, အမေရိကန်သတင်း, virtual reality, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← Apple ကနယူးက iPhone အရှေ့တောင်ကြေညာခဲ့ပါတယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်လိုက်ရှာ? Manspreading အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက် Be နိုင် →